प्रधानमन्त्रीओली चढेको विमान आकाशमा किन ‘होल्ड’ भयाे ? छानविन समिति गठन - Tamang Online
प्रधानमन्त्रीओली चढेको विमान आकाशमा किन ‘होल्ड’ भयाे ? छानविन समिति गठन
काठमाडौं, फागुन २३ । मंगलबार झापाबाट फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली चढेको विमानले अवतरण गर्नुअघि आकाशमा ३ चक्कर लगाउनुपरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढेको विमानलाई अवतरणका क्रममा आकाशमा होल्ड गरिएकोबारे छानविन गर्ने भएको हाे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यसबारे छानविन गर्न सहसचिव सुरेश आचार्यको संयजकत्वमा समिति बनाएको छ ।
यति एयरलाइन्सको सो विमानमा ‘भीभीआईपी’ रहेकोबारे जानकारी हुँदा हुँदै किन होल्ड गरियो भन्नेबारे अब छानविन हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
« खादाकाे महत्व: खेन्पाे कमल भण्डारी (महासचिब,नेपाल बौद्ध महासंघ) (Previous News)
(Next News) क्रिश्चियनको भीडमा बौद्ध धर्म »